သတင်း - လက်လွှဲကို ဘယ်လိုမှန်အောင်သုံးရမလဲ။
webbing sling အား အလွှာတစ်ခုတည်း၊ နှစ်လွှာနှင့် အလွှာလေးခုအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပြီး ချုပ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ polyester flat webbing sling အရွယ်အစားကို အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အရ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည် (1-50 တန်ဝန်၊ အရှည် 1-100 မီတာ) နှင့် bearing မျက်နှာပြင်သည် ကျယ်သောကြောင့် မျက်နှာပြင်ဝန်၏ဖိအားကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်၊ webbing belt သည် အရာဝတ္တုများကို ချောမွေ့ကောင်းမွန်သော ပြင်ပမျက်နှာပြင်များဖြင့် လွှင့်တင်သောအခါ၊ လွှင့်တင်ရမည့်အရာများကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။ဘေးကင်းမှုအချက်အချိုးအစား 6:1 ဖြင့် ဝတ်ဆင်မှု အကာအကွယ်အဖုံးနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း အကာအကွယ်အဖုံးတို့ဖြင့် တွဲဆက်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ကြိုးသိုင်းကြိုးကို ထူးခြားသော အညွှန်းတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး သယ်ဆောင်သည့် တန်ချိန်ကို ခွဲခြားရန် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အရောင်များကို အသုံးပြုထားသည်။လက်လွှဲပျက်စီးသွားလျှင်တောင် ခွဲခြားရလွယ်ကူသည်။သေးငယ်သောနေရာများတွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်အတွက် စလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကို PU ဖြင့် မာကျောစေနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ဝန်အောက် 3% အောက် သို့မဟုတ် လျော့နည်းသည် breaking load အောက်တွင် 0% နှင့် ညီမျှပြီး အသုံးပြုသော အပူချိန်သည် 40 ℃ - 100 ℃ ဖြစ်သည်။
1.အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ကြိုးကို ချိတ်၏ တွန်းအားဗဟိုသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆွဲပြီး ချိတ်၏အဖျားတွင် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆွဲပါ။
2. webbing lifting straps များကို ဖြတ်ကျော်ရန်၊ လိမ်ခြင်း၊ ထုံးခြင်း၊ ကျစ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်မပြုဘဲ မှန်ကန်သော အထူး hoisting link နှင့် ချိတ်ဆက်သင့်ပါသည်။
3. အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ထမ်းများမှ ညွှန်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး ဝန်ပိုတင်ခြင်းကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။
4.စလင်းကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ကြိုးနှစ်ချောင်းကို မြောင်းနှစ်ထပ်သို့ တိုက်ရိုက်ဆွဲချပြီး တစ်ခုစီကို ချိတ်နှစ်ခု၏ အချိုးကျသော တွန်းအားဗဟိုတွင် ချိတ်ဆွဲပါ။မျှောကြိုးလေးခုဖြင့် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ ကြိုးနှစ်ချောင်းစီကို နှစ်ထပ်ချိတ်တွင် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆွဲပါ။ အတွင်းစလင်းကြိုးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ထပ်မထပ်နိုင်စေရန် သတိပြုပါ၊ မျှားသည် ချိတ်၏ဖိစီးမှုဗဟိုနှင့် အချိုးညီနေသင့်သည်။
4. ချွန်ထက်သောထောင့်များနှင့် အစွန်းများရှိသောဝန်များကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ လောက်လွှဲကို အစွပ်များနှင့် ထောင့်အကာများကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများဖြင့် ကာကွယ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လောက်လွှဲ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တာရှည်ခံစေရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို ဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
5.ဆလင်ဒါကို လွှင့်တင်ရန် မျှောကြိုးတစ်ခု လိုအပ်သောအခါ၊ ၎င်းအား နှစ်ချက်လှည့်သော လေတွန်းအားဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသင့်သည်။
6. ချိတ်၏အကွေးအပိုင်းသည် webbing sling ကိုအသုံးပြု၍ အကျယ်ဦးတည်ချက်တွင် အညီအမျှမတင်နိုင်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ချိတ်၏အတွင်းပိုင်းခိုင်ခံ့မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ချိတ်၏အချင်းသည် အလွန်သေးငယ်ပါက မျက်လုံးနှင့်ချိတ်ဆက်မှု၊ webbing သည် မလုံလောက်သဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် မှန်ကန်သော connector ကို အသုံးပြုသင့်သည်။
7. ပိုက်အရာဝတ္ထုများကို လွှင့်တင်သည့်အခါ မှန်ကန်သော လွှင့်တင်သည့်နည်းလမ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးသင့်ပြီး လွှင့်တင်သည့်ထောင့်သည် 60° အောက်ဖြစ်သင့်သည်။
8. အရာဝတ္ထုများကို လောက်လွှဲပေါ်တွင် ဖိမထားသင့်ဘဲ အန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်အတွက် အောက်ဘက်မှ လောက်လွှဲကို ဆွဲထုတ်ရန် မကြိုးစားသင့်ပါ။အရာဝတ္တုကို ကူရှင်ထားရန်၊ မျှော့ကို ချောမွေ့စွာထုတ်ရန် နေရာအလုံအလောက်ချန်ထားပါ။
9. စက်ဝိုင်းကြိုးကြိုး၏ လက်စွပ်၏ အဖွင့်ထောင့်သည် 20° ထက် မပိုသင့်ဘဲ လွှင့်တင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မျက်လုံးကွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရပါမည်။
10. ကြမ်းတမ်းသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် မျှော့များကိုအသုံးပြုခြင်းအား တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
12. စလောင်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်၊ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် ၎င်းကိုဆွဲထားရန် သင်ရွေးချယ်သင့်သည်။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 13-2022